नवलपुर जिल्ला अस्पतालमा सर्प दंसको उपचार सुरु | हुलाकी अनलाइन
खगराज सापकोटा, कावासोती – जिल्ला अस्पताल नवलपुरमा सर्पदशंको उपचार सुरु भएको छ । यसअघि नीजि क्षेत्रको कालिगण्डकी अस्पतालमा मात्र उपचार हुदै आएकोमा सरकारी अस्पतालले पहिलो पटक यो उपचार सुरु गरेको हो ।
जिल्ला नटुक्रीदा जिल्ला पृथ्वी चन्द्र अस्पताल परासीमा यो सुविधा भए पनि नवलपुरका स्थानीयले भने उपचार लिन पाएका थिएनन् । भरतपुर तथा अन्य स्थानमा जादा बाटोमानै उपचार अभावमा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
मध्यविन्दु सामुदायिक स्मृती अस्पताललाई प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालको रुपमा संचालन गरेपछि यो अस्पतालले सुविधा पनि सुरु गरेको हो । अव चौविस घण्टा यो सुविधा संचालन हुनेछ । जिल्ला अस्पताल नवलपुरका अध्यक्ष गोपाल खनालले अस्पताललाई सर्पदंशको उपचारसंगै अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न लागिएको बताउनु भयो । ‘नवलपुर क्षेत्रमा सर्पदशं र दुर्घटनाको घटना बढी हुने गर्दछ । खनालले भन्नुभयो ‘सर्पदशंको उपचारका लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार र औषधी सहितको व्यवस्था हुनेछ । साथै अन्य सेवालाई पनि बनाउदै लैजाने योजना छ।’
प्रदेश सरकारबाट चालिस लाख प्राप्त भएकाले यसबाट पुर्वाधार निमार्णमा खर्च गरीने छ । तर अझै पनि सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) नहुदा समस्या छ । नवलपुर क्षेत्र विषालु सर्पको बासस्थानका रुपमा परिचित भएपनि उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाको भर पर्दा अधिकांसले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । वहाले भन्नुभयो ‘अव सबै हातेमालो गरेर त्यो समस्याको समाधान गरिने छ ।’
उपचारका लागि सघन(आइसियु) सेवा भएको अस्पताल आवश्यक परेपनि सो सेवा जिल्लामा उपलब्ध नहुदा सर्पदंशका बिरामीले दुख पाएका हुन् । आइसियुमा उपचार गर्ने बिरामी जिल्ला बाहिर पठाउदा बाटोमै ज्यान जाने जोखिम रहेको छ । चैत देखि असोजसम्म बिषालु सर्पको टोकाइका बिरामी अत्याधिक हुने गर्दछन् ।
गत अर्थिक वर्षमा जिल्लामा सर्प दंशको उपचार हुने एक मात्र अस्पताल कालिगण्की अस्पतालमा मात्र १ सय ८९ जना सर्पले डसेको भन्दै सर्व साधारण आएका थिए । उनीहरु मध्य ८ जनालाई सर्पको विष भेटीएको र अन्यलाई २४ भण्टा निगरानीमा राखेर घर पठाईएको अस्पतालका सर्प दंस उपचार विशेषज्ञ डा. छविलाल थापाले बताउनु भयो । सो अवधिमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । सर्पले टोकेका बिरामी मध्ये १० प्रतिसत मात्र विषालु विसालु सर्पले टोकेका विरामी पाइएको डा. थापाले बताउनु भायो । थापाले सर्पले टोकेका विरामीलाई मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुने ब्यवस्था गर्न सकिए अधिकांस नवलपुरबासी लाभान्वित हुने बताउनुभयो । वहाले सर्वसाधारणमा सर्प दंश सम्वन्धि जानकारीको अभाव र विरामीले हेलचेक्राई गरी समयमा अस्पताल नल्याएका कारण पनि धेरैैको ज्यान जाने गरेको बताउनु भयो ।
विहिबार जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई सर्प दंसको उपचार सम्वन्धि तालिम प्रदान गरिएको छ । तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा सर्प दंस विशेषज्ञ डा. छविलाल थापा, कावासोती नगरपालिकाका मेयर चन्द्र कुमारी पुन, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख ख्याम के.सी. सर्प विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता कमल देवकोटा, नवलपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष डासुराज पोख्रेल,अस्पतालमा कार्यरता डाक्टर तथा कर्मचारी, अस्पताल संचालक समितिका पदाधिकारीको उपस्थिती रहेको थियो ।०७६ साउन-२१